Nagu saabsan - Transben Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
Saxanka Ice Cube
qalabka shaqooyinka badan
Transben Technology (Shenzhen) Co., Ltd waa shirkad tiknoolajiyadeed oo soo ifbaxaysa oo isku dhafan cilmi baarista iyo horumarinta qalabka cusub ee ilaalinta deegaanka. Wax taaj oo kale oo ah waxsoosaarka alaabada la dhammeeyay iyo dalabka iyo dhiirrigelinta leh silikoon ka ilaalinta deegaanka
Waxyaabaha alaabta guriga laga helo:
silikoon Bakeware, silikoon derin, maado silikoon ah, silikoon weel muufka ah, caaryada shukulaatada, caaryada barafka barafka, Silikonka spatula, Silicone whisk, cookie jare, Bakeware for Festival, qalabka jikada silicone, Silicone trivet, Silicone glove, Silicone Utensil, cookie jaraya, Biin rogid ah oo alwaax ah, qalabka dubista carruurta, xiiraha, Diyaaradda sinjibiil ee loo yaqaan 'Grated sinjibiil', silikoon laallaabi karo maddiibad cusub, shaabad lagu kariyo 'silicone cookie', qalabka jikada NYlon, qalabka jikada ss, qalabka BBQ, qalabka waxqabadka badan
aan calaamadeynin qabatooyin istiraatiijiyad adag, xujooyinka xanaanada iskuulka ee loo yaqaan 'silicone', xayeysiisyada gacanta, masaxada shaashadda shaashadda taleefanka gacanta, qoraallada dhejiska leh, waraaqaha istiikarka ah, looxyada sawirrada silikoon ah, xarkaha biyaha ee aan biyuhu karin, maaskaro silikoon ah, kaararka xujada carruurta, mashiinka barashada ee barta-akhriska carruurta, Codsiyada cusub ee silikoonka sida istiikarada TPE ee xujada, istiraatiijiyada isdhexgalka ciyaarta ee VR, tuubbooyin badan oo deg deg ah, iyo alaabooyin isku dhafan oo silicone ah.
Waxay leedahay rukhsad codsi oo badan oo ku saabsan agabyada cusub, waxayna soo saartaa agab caafimaad oo cusub 、 hadiyado supplies alaabada hooyada iyo ilmaha care daryeelka quruxda supplies sahayda isboortiga articles alaabta guriga jikada 、 taleefanka gacanta oo iswaafajinaya dhijitaalka iyo sidoo kale alaabooyinka kale ee caafimaadka deegaanka ilaaliya.
Dhamaanteen alaabta ceyriinka ah waxay ku beegan tahay ROHS / FDA / LFGB iwm heerarka baaritaanka deegaanka heerarka cuntada ee silikoon jel. Dabcan iyada oo loo marayo shahaadada shahaadada tayada iyo maaraynta nidaamka caalamiga ah ee ISO9001 ： 2015.
Waxaan ku takhasusay warshadaha Silica hadda 20 sano. Waxaan haynaa 10% faa'iidooyinka loo adeegsado horumarinta habab cusub, hagaajinta tayada wax soo saarka, shaqaalaha tababarka iyo kordhinta qalabka sanad walba. Hada shirkadeenu waxay laheyd warshad 15000 mitir murabac ah si ay ula kulanto amarradaada OEM iyo ODM.
Kaliya ii sheeg waxa aad raadineyso si toos ah. Marwalba waan joogaa halkan.
Macaamiisheena badankood ee ka socda Yurub, Ameerika, Kanada, Nederland, Baraasiil, Australia, Japan iyo Kuuriyada Koofureed iyo kooxaha kale ee macaamiisha ah, Aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqaynaa macaamiishan joogtada ah ee ila shaqeynayey muddo dheer. Mabda 'shirkadeena ayaa u janjeedha macaamiisha. Waxaan had iyo jeer diirada saarnaa inaan siino macaamiisha wax soo saar qanciya, oo waliba ah waxa noogu farxadda badan.
Dhaqanka Shirkadeed ：
Hadafkeena: Teknolojiyada Trans waxay ka timaadaa nolosha
Qiimaheena: Ganacsi Daacadnimo oo leh Qiimaynta Hal abuurka iyo Ilaalinta Deegaanka si loo abuuro Iskaashi Caafimaad
Cinwaanka:7D, Cutubka 3, Dhismaha 18B, Jindi Meilong Town, Xinniu Community, Minzhi Street, Degmada Longhua, Shenzhen, Guangdong china
Right Xuquuqda daabacaadda - 2010-2023: Dhammaan Xuquuqda Ayaa Leedahay.